MICS 2018: Nihena 42% ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka | NewsMada
MICS 2018: Nihena 42% ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka
Nihena ho 42% ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ho an’ny zaza latsaky ny 5 taona araka ny fanadihadiana MICS 2018 farany teo raha mbola 47,3% izany ny taona 2012-2013, hoy ny fanazavan’ny mpandrindra nasionalin’ny Ofisim-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo (ONN), Solofonirina Lucie, omaly teny Andrainarivo. Mbola ambony (manodidina 60%) kosa ny taha ho an’ny afovoan-tany ka mbola mila ezaka. Nihatsara kosa ny zava-misy any atsimo momba ny fiahiana ara-tsakafo fa tandidomin-doza ny any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany, Betsiboka ary Menabe. Ho an’ny faritra voalohany, betsaka ny toerana saro-dalana ary tsy mivezivezy ny vokatra. Ho an’ny Menabe sy Betsiboka, manjaka ny tsy fandriampahalemana ka tsy afa-mamokatra ampy ho an’ny filana ny mponina.
Paikady iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ao anatin’ny PNAN III 2017-2021 ny fanovozan-tsoa ny kazaran-tsakafo ho an’ny zaza sy ny fampinonoana azy, mandritra ny enim-bolana voalohany hikarakarana ny 1000 andro voalohan’ny zaza. Omena karazana singa mpamelona koa ny vehivavy mitondra vohoka hamenoana ny filana. Ankoatra ny fanomezana vitamina A ny zaza, notovozin-tsoa (vitamina A sy fer) koa ny koba fanome ny zaza. Ampianarina koa ny renim-pianakaviana hanamaina sy hitahiry ny vokatra toy ny soanambo, mangahazo, trondro… ho azo omena ny zaza amin’ny fotoana rehetra.
Manomboka amin’ny fambolena mandalo amin’ny fanodinana hatramin’ny fivarotana azy no mila manaraka fenitra ny sakafo, hoy ny minisitry ny Fahasalamana, profesora Rakotonirina Julio. Nivory teny Andrainarivo volohany, omaly ny fiombonana sampandraharaha misehatra amin’ny fanovozan-tsoa ny sakafo (ANFA) namaritra ny asa hatao sy ny paikady amin’ny fanovozan-tsoa ny sakafo eto amintsika.